သတ္တုပစ္စည်း Card ကို, Gold Card, Silver Card, သတ္တုဗုဒ္ဓ Card ကို, Metal Buddhism Card, Religious Card, Buddha Metal Card, Buddhism Metal Card, Magnetic stripe metal card, IC chip metal card, Metal Magnetic stripe card, RFID metal card
သတ္တုပစ္စည်း Card ကို, သတ္တုဗုဒ္ဓ Card ကို, သံလိုက် Stripe ဟာသတ္တု Card ကို
အမျိုးမျိုးသောပစ္စည်း Card ကို Buddha Metal Card, Buddhism Metal Card, Gold Card, Gold Metal Card, IC chip metal card, Magnetic stripe metal card, သတ္တုဗုဒ္ဓ Card ကို, Metal Buddhism Card, သတ္တုပစ္စည်း Card ကို, Religious Card, Silver Card, Silver Metal Card
According to customer requirements for the production of various shapes and sizes of shaped metal cards.
ပစ္စည်း: ကြေးနီ / သံမဏိ
အရွယ်: အသုံးအများဆုံးသုံးမျိုးရှိပါတယ်, 85မီလီမီတာ * 54mm, 80မီလီမီတာ * 50mm, 76မီလီမီတာ * 44mm, ထို့အပြင်ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်တွေနဲ့အညီအခြားအသတ်မှတ်ချက်များထုတ်လုပ်နိုင်သည်.
အထူ: ဘုံအထူ 0.35mm ဖြစ်ပါတယ်, ထို့အပြင် 0.25mm လုပျနိုငျ, 0.30မီလီမီတာနှင့် 0.40mm, စသည်တို့ကို.
အရောင်: ရှေ, ငွေ, နှင်းဆီပင်, စသည်တို့ကို.
ဖြစ်စဉ်: အဆိုပါချေးဖြစ်စဉ်ကို / များတွင်လည်းကောင်းဖြစ်စဉ်ကို
အဖုံး: လွတ်လပ်စွာ PP အိတ်ထုပ်ပိုး
Gold Card / Silver Card, also known as Metal VIP Card, the choice of high-grade copper or stainless steel, the use of new technology, through the design, cutting line molding, stamping, etching, ပုံနှိပ်ခြင်း, polishing, electroplating, coloring, packaging, စသည်တို့ကို. Flowshop Seiko made, gold-plated silver effect. Brightness is like real gold and real silver. Is the production of high-end VIP cards, အဖွဲ့ဝင်ကတ်များ, commemorative cards, calendar cards, the preferred material.
Card surface can be printed LOGO or code.
Can be IC chip encapsulated, can also be made of metal magnetic stripe cards.
Drawing, hollow, shaped, corrosion concave, polished mirror, stainless steel color, corrosion filling (coloring), ပိုးမျက်နှာပြင်, လေဆာရောင်ခြည်ထွင်းထု, Two-ရှုထောင်ကုဒ်, ဂဏန်း, contact IC chip, သံလိုက်အစင်း, ဘားကုဒ်, silk screen signature bar....
I am interested in your product Metal Material Card, သတ္တုဗုဒ္ဓ Card ကို, သံလိုက် Stripe ဟာသတ္တု Card ကို
prev: Teslin ပစ္စည်း RFID Chip ကဒ်
နောက်တစ်ခု: RFID အနုပညာစက္ကူကဒ်, coated စက္ကူပစ္စည်း Card ကို